China ထိပ်တန်း Hydraulic Breaker LBS68 စက်ရုံနှင့်ထုတ်လုပ်သူများ Shengda
LBS ၏ထိပ်တန်းဟိုက်ဒရောလစ်အမြောက်သည်ပိုမိုထိရောက်သောသပိတ်မှောက်ခြင်း၊ ပစ္စည်းတစ်ခုလုံးသည်အဆင့်မြင့်ဒီဇိုင်း၊ ရိုးရှင်းသောဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံ၊
LBS ၏ထိပ်တန်းဟိုက်ဒရောလစ်အားပိုမိုထိရောက်စွာသုတ်သင်နိုင်ခြင်း၊ ပစ္စည်းတစ်ခုလုံးသည်အဆင့်မြင့်ဒီဇိုင်း၊ ရိုးရှင်းသောဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံ၊
ပိုလျှံအစိတ်အပိုင်းများအတွက် 1. ရှေ့ဆက် - ရှာဖွေနေ Self- သုတေသန။
3. တင်းကျပ်သောလုပ်ထုံးလုပ်နည်းအရည်အသွေးကိုကြီးကြပ်, တင်ပို့မီထုတ်ကုန်တစ်ခုချင်းစီကိုစမ်းသပ်
အရည်အသွေးပြည့်ထိန်းချုပ်မှုစနစ်ပြည့်စုံသော ISO9001: 2015
6. အာမခံကာလသည်တစ်နှစ်ဖြစ်သည်။ ကျနော်တို့နာရီပြန်ကြားချက်နှင့်ဖြေရှင်းရန်နှစ်ဆယ်လေးနာရီအပေါ်ကတိ။ လိုအပ်ပါကပြsolveနာကိုဖြေရှင်းရန်နည်းပညာဆိုင်ရာဝန်ထမ်းများကိုကျွန်ုပ်တို့စေလွှတ်သည်။
၁။ ကျွန်ုပ်တို့သည်အကောင်းဆုံးသောပစ္စည်းများကိုရွေးချယ်ပါသည်။ 40CrNiMo, 20CrMo, 42CrMo
2. အပူကုသမှုနည်းပညာကိုဖတ်ရှုခြင်း။ ကျွန်ုပ်တို့တွင်ကိုယ်ပိုင်အပူကုသရေးအလုပ်ရုံနှင့် ၁၀ နှစ်အပူကုသမှုရှိသည်
3. ကျွန်ုပ်တို့တွင်ပထမအဆင့်အင်ဂျင်နီယာများရှိပြီးကျွန်ုပ်တို့၏အလုပ်သမားအများစုသည် ၅ နှစ်ကျော်အတွေ့အကြုံရှိသည်
ထုပ်ပိုး:စံတင်ပို့အထုပ်။တစ်ယူနစ်ကိုလေဟာနယ်သိုလှောင်ခန်းထဲထည့်ပြီး၊ အထုပ်တစ်ခုစီတွင်အောက်ပါဆက်စပ်ပစ္စည်းများပါ ၀ င်သည်။ စင်းနှစ်ခု၊ ရေပိုက်နှစ်ခု၊ တစ်ခုစီ N2 ပုလင်းနှင့်ဖိအားအတိုင်းအတာ၊ အပိုတံဆိပ်တစုံထားတစ်ခု၊ လိုအပ်သောပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုကိရိယာများနှင့်ကိရိယာတန်ဆာပလာတစ်ခုလည်းရှိသည်။
သတ္တုတွင်း ------------ သတ္တုတွင်း, ဒုတိယအကြိမ်ချိုးဖောက်
သတ္တုရူပဗေဒ ------- ချော်ဖယ်ခြင်း၊ မီးဖိုနှင့်အုတ်မြစ်ကိုဖြိုချခြင်း
လမ်း ------------- ပြုပြင်ခြင်း၊ ဖောက်ခြင်း၊ ဖောင်ဒေးရှင်းအလုပ်
မီးရထား ---------- ဥမင်လိုဏ်ခေါင်း, တံတားဖြိုဖျက်
ဆောက်လုပ်ရေး - ဆောက်လုပ်ရေးနှင့်ကွန်ကရစ်အားဖြိုချခြင်း
သင်္ဘောပြုပြင်ခြင်း - ကိုယ်ထည်မှသံချေးနှင့်သံချေးများကိုရှင်းလင်းခြင်း
အခြားသူများ ----------- အေးခဲနေသောရွှံ့များကိုချိုးခြင်း
အမျိုးအစား ထိပ်တန်းအမျိုးအစားဟိုက်ဒရောလစ် Breaker
ကိရိယာအချင်း 68 မီလီမီတာ
ရှေ့သို့ အသံတိတ်အမျိုးအစားဟိုက်ဒရောလစ် Breaker LBS85
နောက်တစ်ခု: ဘေးထွက်အမျိုးအစားဟိုက်ဒရောလစ် Breaker1 LBS75
ဟိုက်ဒရောလစ် Breaker အပိုပစ္စည်းများ